Ku soo degida Dayaxa, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Tallaabo weyn oo loogu talagalay aadanaha
Ma doonayo inaan ka weeciyo guusha Nasa ee naxdinta leh, laakiin waxaan wali isweydiiyaa: Maxay talaabooyinkan taariikhiga ah ee dayaxa noo sameeyeen? Ereyadii Armstrong wali wey dhawaaqayaan maanta - laakiin sidee buu ku soconayaa dayaxa si uu u xaliyo dhibaatooyinkayaga? Waxaan wali haysannaa dagaal, dhiig daadanaya, gaajo iyo cudur, waxaan kordhinaynaa aafooyinka bay'ada sababa kuleylka adduunka.
Masiixi ahaan, waxaan oran karaa iyadoo si buuxda loo aaminsanahay in tillaabooyinka taariikhiga ah ee ugu waqtiga dheer, oo runtii matalayay "tillaabooyinka waaweyn ee bini-aadamka", ay ahaayeen tillaabooyinkii Ciise uu ka qaaday qabrigiisa 2000 sano ka hor. Bawlos wuxuu sharxay baahida loo qabo talaabooyinkan nolosha cusub ee Ciise: «Haddii Masiixu uusan sara kicin, rumaysadkiinnu waa khayaano; Dembigii lagugu dembaabay dembiyadiinna weli waa lagaa saaraa » (1 Korintos 15,17).
Si ka duwan dhacdada 50 sano ka hor, warbaahinta adduunka ma jirin, majiro daboollo caalami ah, lama dirin telefishanka ama lama duubin. Ilaah uma baahna nin inuu sharraxaad ka bixiyo. Ciise Masiix ayaa la sara kiciyey wakhti xasilloon marka dunidu hurdo.
Tallaabooyinka Ciise runti waxay ahaayeen aadanaha oo dhan, iyo dadka oo dhan. Sarakiciddiisa waxay sharaxday guuldaradii dhimashada. Ma jiro bini-aadam weyn oo bini-aadamnimadu ka badan karto dhimashada oo keliya. Tallaabooyinkiisa ayaa u dammaanad qaaday carruurtiisa cafiska dembiga iyo nolosha weligeed ah. Talaabooyinkan sida kuwii soo sarakacay waxay ahaayeen xaqiiqdiina waxay ahaayeen kuwa go’aamiya taariikhda taariikhda aadanaha oo dhan. Weyn ayaa ka booday dembiga iyo dhimashada ilaa nolosha weligeed ah. Waxaan og nahay in Masiixu, markuu kuwii dhintay ka soo sara kacay dabadeed aanu dhiman doonin. dhimashadu wax xoog ah ugama saarna » (Rooma 6,9 Tarjubaadda New Geneva).
Ninkaasi wuxuu ku socon karaa dayaxa wuxuu ahaa muuqaal cajiib ah. Laakiin markii Ilaah ku dhintay Ciise iskutallaabta dusheeda dembiyadayada iyo dembiilayaasha, ka dibna uu mar kale kacay oo uu ku orday beerta, tallaabada ugu muhiimsan ee aadamuhu waxay ahayd guud ahaan.